घरमा के कछुवा खान?
केही कारणले, धेरै घरमा कछुवा खाने त सानो आफ्नो सामग्री लागत शाब्दिक केही छ कि धेरै बलियो विश्वास थियो। र यो ती जो बिना छ घर मा हुनेछ - समुद्र वा भूमि। एक अपवाद मात्र कम्तिमा टाढा मा टाढा दक्षिणी समुद्र वा क्रल बसाबास गर्नु कि विशाल सरीसृप लागि बनेको छ सेचिलिस। त्यहाँ यस्तो मिसिन सबैलाई छैन बल खुवाउन भनेर पहिले नै सबैलाई स्पष्ट छन्।
प्रत्येक दोस्रो बारेमा सोधे तिनीहरूले घरमा कछुवा खान के, उहाँले खाने मामलामा यो सरसृप उपलब्धि casually पात सलाद, त्यो अनिच्छा szhuet र त्यसपछि यस्तो सन्तोषजनक र स्वस्थ पकवान पचाउन प्रयोग गर्न, सुत्न तल राख्नु जो फेंक छ भन्छन्।
यसैबीच, यी प्राणीहरू थुप्रै वास्तविक शिकारीहरु छन्। उदाहरणका लागि, रातो-eared Sliders, अक्सर पसलहरुमा बेचिन्छ जो, मासु खाँचो हो। विशेष गरी युवाहरूले, खान र नियमित जमीन मासु उत्तिकै खुसी र पकाएको वा कच्चा माछा छन्। तर हामी तिनीहरूलाई निरन्तर बस मासु खुवाउन हुँदैन। प्लान्ट खाद्य पदार्थ यी सुन्दर प्राणीहरू को एक अनिवार्य आहार को भाग हुनुपर्छ। तपाईंको tortilla वृद्ध, अधिक तपाईं आफ्नो खाना तर्फ विशेष रोपेर आधारित खाद्य पदार्थ सिफ्ट गर्न आवश्यक छ। खैर, एक सरसृप बोट शैवाल संग एक जलजीवालय मा भने, यो बन्द तिनीहरूलाई नियमित, खान हुनेछ नै यसरी फाइबर को आवश्यक रकम प्रदान।
वास्तवमा, घरहरू भन्दा साधारण सिमसार tortilla को घरहरू र पिकनिक देखि स्मृति चिन्ह घर ल्याए छन्। तपाईंलाई थाहा छैन भने गर्नुभएको कछुवा घर जग्गा खाने, आफ्नो "पदक" सलाद र बन्दागोभी खुवाउन सुरु, त्यसपछि उहाँले तपाईं र वर्ष बस्न गर्दैन। यस्तो प्राणीहरू को गर्मी मा घोंघे, mollusks, bloodworms वा earthworms मा भोजमा प्रेम। यो सबै maloappetitny आहार अब कछुवा उद्धार हुनेछ आफ्नो घर मा, यो एक्लै शिकार द्वारा subsist गर्न सक्षम हुन असम्भाव्य छ किनकी, तिमी गर्नुपर्छ। तर, उनको लागि छुट्टै जलजीवालय तपाईं निर्णय भने र tovarki रूपमा उनको hoisted आफ्नो मनपर्ने माछा छैन, यो एक जबकि र त्यसपछि कडी लागि पकड गर्न सक्छन्। बस स्टोरमा नयाँ vualehvostok र Catfish मा नियमित किन्न भूल छैन। तर तपाईं एक सरसृप र केवल मासु र माछा आहार पालन गर्न सक्दैनौं। कछुवा घरमा खान के, तपाईं झिंगा र कलेजो को एक अलग वस्तु चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यी उत्पादनहरु हरेक दिन तिनीहरूलाई जारी गर्नुपर्छ, एउटा वास्तविक व्यवहार तिनीहरूलाई लागि हो।
तपाईं नियमित आफ्नो pitomitsy प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ भने earthworms, यो तपाईं बाहिर विशेष मदत गर्न सक्छ खाना कछुवा लागि। हो, यो पनि पशु पसल बिक्रि छ। उहाँले चिन्ने तिनीहरूले कछुवा ठ्याक्कै खान विशेषज्ञहरु द्वारा संकलित।
घर मा, तपाईं आफैलाई र यो फिड को एक एनालग लागि खाना पकाउन गर्न सक्नुहुन्छ। यो बन्दागोभी, स्याउ, माछा fillets, दूध, अन्डा, र gelatin हुन्छन्। भिटामिन पूरक तयारीको "Tetravitum" र धेरै ट्याब्लेटको देखि प्राप्त पाउडर को एक बिट राख्नुपर्छ रूपमा "क्याल्सियम glycerophosphate।"
Gelatin न्यानो पानी मा पतला र swelled एक जोडी को लागि एक सानो राख्नुहोस्। को Grinder एक गाजर माछा fillets 100 ग्राम पारित भएको थियो, स्याउ जोडी। यो सबै, gelatin हालिदिए छ अन्डा मा संचालित र दूध थप्नुहोस्। मिश्रण राम्ररी मिश्रित र cooled छ। भिटामिन र चक्की मात्र चिसो मिश्रण थपिएका छन्। हो, यो धेरै unappetizing देखिन्छ, तर यो ठीक ठूलो खुशी साथ कछुवा घर खाने छ के छ। परिणामस्वरूप खाद्य फ्रिज मा राखिएको, र यो खाँचो रूपमा बग गर्न खुवाइन्छ जो टुक्रा, कट। एक हप्ताको लागि कहीं सेवा प्रति पर्याप्त। तपाईँ एक कचौरा यसलाई खन्याउन र आफ्नो मनपर्ने सेवा अघि कोठा तापमान खाना न्यानो गर्न नबिर्स।
पाल्तु जनावर - बिरालो चिनचिला
बिरालोहरु गर्न "Advanteydzh": निर्देशन, सङ्केत गर्छ, औषधिको खुराक। पशु औषधि
चिनी possum। विदेशी पाल्तु जनावर
तोते लागि खेलौनाहरू छनौट
बर्जर ब्लन्क Suisse। समीक्षा मालिक
कसरी लामो बिरालोहरु मा एक गर्भावस्था गर्छ? हाम्रो रोचक स्थिति गरेको मनपर्ने बारेमा सबै कुरा
निरीक्षण मान्य वा वाहन कि ठीक
"नोकिया" H97 - स्लिपिङ कीबोर्डको साथ स्मार्टफोन
संसारको जियोसेन्ट्रिक र हेलियसिस्रिक प्रणाली: सार, अर्थ र मतभेद
वोरोनिश रेस्टुरेन्ट सर्वश्रेष्ठ। मेनु र समीक्षा
क्रास्नोडार। थिएटर "Premiere" - एक अद्वितीय उच्च स्तरको थिएटर
सामान्य र रोग अवस्थामा के fluoroscopy हुनेछ
किन सुन्दर छ?
एलटीई स्मार्टफोन, प्रणाली छ जो के हो